Cajiibka wuxuu sheegaa wixii qalad ah waa inaad ka fogaato SMM
Macaamiisha 2017 waxay filayaan in ururada ganacsiga ay si joogta ah ula xiriiraan iyagaiyada oo loo marayo shabakadaha bulshada. Si kastaba ha noqotee, shirkado badan oo e-commerce ganacsade waxay ka faa'iideystaan ​​wax ku oolnimada warbaahinta bulshada iyo Search EngineHagaajinta (SEO) ee soo jiidashada iyo ilaalinta macaamiisha.
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,wuxuu cadeeyaa sadexda khaladaad ee waaweyn ee ay ururadu sameeyaan marka ay qabanayaan ololaha suuq-geynta warbaahinta bulshada - o farmakopoios moy.
1. Hawlgelinta Ololaha iyadoon Isticmaalin Istaraatiijiyad wax ku ool ah
Waa muhiim in la hormariyo hadafyada warbaahinta bulshada si loo hagaajiyo istaraatijiyada suuqgeynta ee internetka.Suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa lahaan kara hadafyo dhowr ah. Hadafku wuxuu noqon karaa in lagu wanaajiyo wacyigelinta brandka ee macaamiisha la beegsaday Himilada kale ee bulshadasuuq-geynta warbaahinta ayaa laga yaabaa inay tahay in la isticmaalo shabakadaha bulshada si ay u bixiyaan adeegyada taageerada macaamiisha Istaraatijiyad warbaahineed oo wanaagsan ayaa isku daraysa hadafyo dhowr ahkor u qaadida isdhexgalka ganacsiga macaamiisha la beegsaday. Istaraatijiyad wax ku ool ah ayaa leh shabakad bulsho oo fiican.
Ganacsiyada wax ka qabta moodooyinka iyo alaabooyinka iyo adeegyada nolosha ayaa lagu dhiirigeliyaaIsticmaal Pinterest ama shabakadaha internetka ee Instagram. Pinterest wuxuu leeyahay shaqaale ganacsi oo u saamaxaya macaamiisha inay iibsadaan alaabo amaadeegyada internetka. Dukaamada iibiya alaabada farsamada iyo adeegga sameeya adiga ayaa isticmaala barnaamijyada YouTube iyo Facebook sababta oo ahawoodooda isugeynta muuqaalka sare leh. Waxaa muhiim u ah ganacsiga si kor loogu qaado goobaha shabakadaha bulshada.
Ka hadalka warbaahinta bulshada ee emails sidoo kale waa hab wax ku ool ah oo kor u qaadaya warbaahinta bulshadagoobaha macaamiisha la beegsaday. Hab kale oo wax-soo-saarka SEO-ga ah wuxuu ku-tiirsan yahay galinta xiriirinta warbaahinta bulshada ee bogga ganacsiga.
2. Dhageysiga Dhageysiga iyo Jawaab celinta
Macaamiishu had iyo jeer waxay bixiyaan faallooyin ku saabsan alaabooyinka iyo adeegyada ay bixiyaan ganacsigaururada. Waxaa muhiim u ah maamulka shirkadda in ay noqdaan kuwo u fiirsada. Waxaa jira dhowr qalab oo loo isticmaali karo in lala xiriiromacaamiisha, tusaale ahaan, Mats Social & Hootsuite. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xaddidan yihiin awooda. Sidaa darteed, ganacsigu waa inuu noqdaa mid waxtar lehsi ay ugu dirto boosteejo kasta oo ay isticmaalaan.
Facebook waa mareeg warbaahin bulshadeed oo awood u siiya ganacsiga si waxtar lehfarriimaha macaamiisha la beegsaday. Shirkadaha waxay la kulmaan caqabado badan marka ay bixiyaan adeegyo iyo alaabo. Shabakadaha bulshadu waxay awood u leeyihiinganacsiyada si ay ula socodsiiyaan macaamiisha dhibaatooyinka ama caqabadaha ka jira hannaanka ganacsiga.
3. Ka qaadista tijaabada
Waa muhiim inaad tijaabiso hawlaha shabakadaha bulshada. Ganacsigawaxay isticmaali karaan siyaabo cusub oo ay ula macaamili karaan macaamiisha. Video-ku-nool waa muuqaal ah oo laga heli karo Facebook iyo Instagram. Waxay hagaajineysaa waqtiga dhabta ahxidhiidhka shaqaalaha iyo macaamiisha. Shirkadu waxay u sheegi kartaa dhageystayaasha la beegsanayo ee ku saabsan wax soo saarka cusub iyada oo loo marayo fiidiyowga noolmuuqaal.
Ganacsiyada ayaa sidoo kale isticmaali kara dabbaaldegga loogu talagalay ololeyaasha dhiirigelinta alaabta ee Facebook. Live-streamingwuxuu soo jiitaa dhagaystayaal badan sababtoo ah waa mid isdhexgalka iyo isticmaala ereyo muhiim ah SEO. Isticmaalayaasha warbaahinta bulshada ayaa la siiyaa fursad ay weydiiyaansu'aalaha iyo raadinta caddaynta. Kulanka xaraashku wuxuu sidoo kale u sahlaa ganacsiga inuu ka barto macaamiisha, gaar ahaan aaggaee kobcinta qanacsanaanta macaamilka.
Hirgelinta SEO ee ku dhaqankaaga ayaa hagaajin kara dadaalada suuq-geynta warbaahinta bulshada. Khubarada SEOwaxay isticmaali karaan keywords keywords ee boostada warbaahinta bulshada. Macaamiisha waxaa lagu soo jiidan doonaa boosteejo ah oo leh macluumaad ku haboon oo ku saabsanwaxtarka wax soo saarka ama adeegga.